Warka Warshadaha LED |
Maxay tahay sababta shaashadda qafiifka ah ee loo yaqaan "curved led" ay caan ugu tahay hadda?
Bandhigyada LED-ka ee qalooca way ka duwan yihiin diyaarad dhaqameed laba jibbaaran oo hoggaan leh, waxay si fiican ugu habboonaan karaan dejinta bey'adda iyo xitaa gebi ahaanba ku milmaan asalka rakibidda. Way naqshadeyn karaan inay la socdaan radian kala duwan marka loo eego asalka rakibaadda kala duwan, si fiican ula jaanqaadaysa tan ...
Dhawaan, Fujian qoryaha Linsen, East galay Hongye, Morgan Electronics, Hai Le Electronics iyo shirkado kale oo badan oo PCB ah ayaa sii deynaya ogeysiiska qiimaha guddiga PCB, ku dhowaad dhammaantood waxay kordhiyaan 10%. Horraantii July, Shandong Jinbao, Kingboard, Mingkang, gobolka Weili, Jin Anguo iyo dhowr shirkadood oo kale ayaa leh ...
Doorkee ayuu P5-ka bannaanka hore ee furan furan ka ciyaaraa?
Gudiga hogaaminta banaanka ayaa door muhiim ah ka ciyaaraya suuqa darbiga la hogaaminayo.Waa inaan fiiro gaar ah u yeelanaa suuqan kadib markii aan helnay amarro fara badan oo banaanka ah. Waa maxay sababta guddi bannaanka ka ah oo qayb weyn ku leh suuqa Maaha oo keliya sababta oo ah dad aad u tiro badan oo u isticmaala halkii ay kaarka xayaysiinta ama LCD-ga ka heli lahaayeen laakiin ...